मेरो उम्मेदवारीले सबै व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ, चुनाव जित्नेमा विश्वस्त छु : मानकाजी श्रेष्ठ::Bandipur Times
मेरो उम्मेदवारीले सबै व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ, चुनाव जित्नेमा विश्वस्त छु : मानकाजी श्रेष्ठ
२२ पुस, तनहुँ । तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको महाधिवेशन आगामी २८ र २९ गते सम्पन्न हुँदैछ । नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने महाधिवेशन भएकाले जिल्लामा चुनावी माहौल पनि बढिरहेको छ । संघको अध्यक्षका लागि मानकाजी श्रेष्ठ र र ईश्वर विष्टको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ । अध्यक्षका दाबेदार श्रेष्ठसँग बन्दिपुर टाइम्सका लागि कमलमणि पोख्रेलले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा विजयी हुनुभयो भने केके काम गर्नुहुन्छ ?
मेरो मूल एजेण्डा भनेकै व्यापार, व्यवसाय र उद्योग क्षेत्रमा लागेका साथीभाइको हकहितका लागि काम गर्ने हो । जिल्लाभित्र रहेका उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्नका लागि म सक्षम छु । उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा धेरै समस्या छ । भन्सारबाट सामान छुटाउँदा समस्या मात्रै होइन महङ्गोसमेत परिरहेको छ । जसका कारण उत्पादन लागत बढ्न गई उपभोक्ताले महङ्गोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या समाधानका लागि कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन नहुँदासम्मको लागि भन्सार महसुल छुट गराउने मेरो प्रयास रहनेछ ।
तनहुँ जिल्लामा व्यापार, व्यवसाय र उद्योग विस्तारका लागि केके समस्या छन् ?
तनहुँ जिल्ला धेरै सम्भावनाले भरिएको भए पनि समस्या समाधान हुन नसक्दा उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको विकास जति हुनुपर्ने त्यति हुन सकेको छैन । भौगोलिक विकटताका कारण सम्भावना भएका क्षेत्रहरु पनि पछाडि परिरहेका छन् । विशेष गरी यातायात र सडक पर्याप्त नहुँदा उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न सकिने अवस्था छैन । कुन ठाउँमा कस्तो व्यवसाय र उद्योग फस्टाउँछ भन्ने जान्दा जान्दै पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुँदा उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि त राज्यका निकायसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने होला ? के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
समस्या समाधानका लागि एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन । सम्बन्धित निकायका सबै जिम्मेवार व्यक्तिले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । म उद्योग वाणिव्य संघको नेतृत्वमा पुगेको खण्डमा राज्यका निकायसँग समन्वय गरेर नीतिगत सुधारदेखि भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेर उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि सहज बनाउने छु ।
तनहुँमा यातायातको असुविधाले उद्योग र व्यापार क्षेत्र फस्टाउन सकेन भन्नुभयो । राज्यले यस्ता कुरामा चासो दिएको छैन ?
राज्यका तर्फबाट जति सहयोग हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । निजी क्षेत्रका समस्याका बारेमा राज्य जानकार हुँदा हुँदै पनि समाधानका लागि चासो नदिएकाले नै हामी जस्ता व्यवसायी राज्यसँग लडाईै गर्नुपरेको छ । यातायातको मात्रै कुरा होइन, कच्चा पदार्थ आयातमा हुन समस्या समाधानका लागि पनि राज्यले केही गर्न सकेको छैन ।
सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने अरु केके काम देख्नुभएको छ ?
तनहुँ जिल्लामा थुप्रै यस्ता जग्गाहरु छन्, जहाँ कृषि खेतिदेखि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । तर सिँचाईको अभावमा प्रशस्तै जग्गाहरु खाली बसिरहेका छन् । त्यस्ता जग्गासम्म सिँचाई र सडक पु¥याउन सक्ने हो भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता जग्गाहरुको सदुपयोगका लागि चिन लगायतका देशहरुले समेत लगानी गर्ने चासो देखाएका छन् । त्यसैले तनहुँमा विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि मेरो पहल सार्थक हुनेमा म विश्वस्त छु ।
तपाईको नेतृत्वमा रहेका संस्थाभित्र त साना व्यापारीदेखि उद्यमीसम्म आवद्ध छन् । ति सबै पक्षलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
मैले चुनाव जितेपछि ठूला समस्या समाधान गरेर मात्रै सुख पाउँदिन । हामीसँग स–साना व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने साथीहरु पनि धेरै छन् । तिनका हित हुनेगरी पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । मैले अघि भनेजस्तो कच्चा पदार्थदेखि सडक संजालसम्मका कुरामा काम गर्न सकियो भने त्यसले सबै व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ । त्यसबाहेक पनि मौसमअनुसार हुने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै बजार विस्तारका लागि मेला, महोत्सव र प्रदर्शनीको खाँचो छ । तनहुँमा विभिन्न जातजातीसँग सम्बन्धिन संस्कृति उद्योग, व्यवसायसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । जातीय संस्कृति, भेषभुसा, परम्परा, कला लगायतका कुरा पनि व्यवसायसँग जोडिने हुँदा तिनलाई पनि बजारमा पु¥याउनुपर्ने चुनौति छ । यि सबै कामका लागि मैले योजना बनाएको छु ।
तपाईले गर्ने कामका योजनाले मात्रै त उद्योगि व्यवसायी विश्वस्त हुन सक्दैनन् होला । विगतमा के कस्ता काम गर्नुभएको थियो, जसले तपाईलाई यसपटक चुनाव जिताउन भूमिका खेल्छ ?
म विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा आवद्ध छु । सबै उद्योगि व्यापारीको हक हितका लागि नेतृत्वमा नरहँदा पनि काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने तनहुँको पूर्वी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म कसैले पनि नेतृत्वको अवसर पाएको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने बन्दिपुर व्यापार संघलाई नै तनहँु उद्योग वाणिज्य संघमा परिवर्तन गरिएको हो । त्यसैले यो संस्थाको जन्मभूमि भनेको बन्दिपुर–डुम्रे हो । त्यसैले पनि अब यस क्षेत्रबाट नेतृत्वमा पुग्नु जरुरी छ ।
तनहँु उद्योग वाणिज्य संघमा अहिलेसम्म यस क्षेत्रबाट किन नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व हुन सकेन ?
यो कुरा मैले विगतमा धेरै पटक भनेको थिएँ । व्यापारी, उद्योगि साथीहरुलाई क्षेत्र मिलाएर नेतृत्व लिँदा सबै ठाउँको विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मैले विगतमा तनहुँको सदरमुकाम नै दमौली भएकाले सुरुमा दमौलीका जो कोही साथीले संघको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि पूर्वी क्षेत्रबाट नेतृत्व र पश्चिम क्षेत्रका साथीहरुलाई नेतृत्व दिने भनेको थिँए । तर यो कुरा व्यवहारिक रुपमा पूरा हुन सकेन । दमौलीबाट धेरैपटक नेतृत्वमा पुगिसक्नुभएको छ । पश्चिम क्षेत्रबाट पनि २ पटक नेतृत्व भइसकेको छ । तर पूर्वी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म नेतृत्व लिन पाएको अवस्था छैन । त्यसैले पनि यसपटक मेरो उम्मेदवारी प्रति धेरै साथीहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । मैले चुनाव जित्नेमा म विश्वस्त छु । मेरो उम्मेदवारीले सबै व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ ।